सुन्दर र बोल्ड हुँदा पनि बलिउडमा चल्न सकेनन् यी नायिकाहरु, अहिले गर्छन् यस्तो काम ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सुन्दर र बोल्ड हुँदा पनि बलिउडमा चल्न सकेनन् यी नायिकाहरु, अहिले गर्छन् यस्तो काम !
बलिउडमा सबै नायिका सुन्दर हुनुका साथै अभिनयमा पनि कुशल भएर मात्रै पनि दर्शकले रुचाउने गर्छन् भने छैन। बलिउडमा बर्षेनी धेरै चलचित्र रिलिज हुने गर्छ। तर त्यस मध्य सबैले राम्रो व्यापार गर्छन् भन्ने निश्चित रहेको हुँदैन। केही नायिकाहरु बलिउडमा फ्लप भएता पनि कमाइ गर्न भने विभिन्न तरिकाका कारण खप्पिस हुने गर्छन्। आज हामी यस लेखमा केही नायिकाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ। यी नायिकाहरु फ्लप भए पनि कसरि कमाइ गर्छन् त हेर्नुहोस्।
बिग बोस विजेता समेत बनिसकेकी यी नायिका कुनै समयमा धेरै चर्चित रहेकी थिइन्। उनि पंजावी चलचित्रमा पनि काम गरिसकेकी नायिकाको रुपमा रहेकी छिन्। तर उनले चलचित्रमा देखा नपरेको धेरै भएता पनि उनि अहिले कार्यक्रमहरुमा परफर्म गरेर एक कार्यक्रम बारबार लगभग भारतीय ६ देखि १२ लाख सम्म कमाउने गरेकी छिन्।
बलिउडका फ्लप नायिकाहरुमा नेहा धूपियाको पनि नाम आउने गर्छ। तर उनि अहिले विभिन्न रियालिटी शो होस्ट गरिरहेकी छिन्। यति मात्र नभई उनले एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति गरे वापत भारतीय ६ देखि ८ लाख सम्म लिने गरेकी छिन्।
अभिनेता अक्षय कुमारसँग चलचित्र गर्न लागेकी यी नायिकाले बलिउडमा आफ्नो उपस्थिति खासै बलियो बनाउन सकिनन्। तर पनि उनि अहिले राम्रै पैसा कमाइरहेकी छिन्। उनि एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति देखाएको लगभग भारतीय १५ देखि १८ लाख सम्म लिने गरेकी छिन्।
यी नायिकालाई पहिलो पटक अक्षय कुमारसँग विज्ञापन गर्ने मौका मिलेको थियो। उनले बलिउडमा चलचित्र “मिकी भाइरस” बाट आफ्नो करियर शुरु गरेकी थिईन्। उक्त चलचित्रले खासै राम्रो व्यापार गर्न सकेको थिएन। अहिले उनले कुनै पनि चलचित्र पाएकी छैनन्। तर उनि एक कार्यक्रममा प्रस्तुति देखाएको लगभग भारतीय ३ देखि ५ लाख सम्म लिने गरेकी छिन्
भागरथीको लागि नायिका वर्षा शिवाकोटीले लेखिन सबैलाई रुवाउने मार्मिक पत्र(भिडियो सहित)